Carlborg: In la sii shido maahan goob aan horay u nabdoonayn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mareeykanka ayaa la filayaa inuu safaaraddiisa Israa'iil uu raro.. sawir: TT
Carlborg: In la sii shido maahan goob aan horay u nabdoonayn
La daabacay onsdag 6 december 2017 kl 16.19
Dhaleeceeyn ayey ka muujiyeen kooxaha Falastiin ee dalka Sweden wararkii ka soo yeerey dalka Mareeykanka ee la xiriiray in makaaminta maqaamka magaalada Jerusalaam (Qudus) iyo in loo raro safaaradda Mareeykanka uu dalka Israa’iil ku leeyahay, lagana raro magaalada Telaaviiv.
Henrik Carlborg, wuxuu xubin ka yahay hoggaanka kooxaha Falastiin:
-Waa go’aan daandaansi ah. Waxaannu ka hadleeynaa gobol aanay nabaddiisu xasilooneyn oo ey ka jiraan khilaafyo. Go’aan noocan ihi wuxuu hor-seedi doonaa khilaafyo hor leh iyo xasiloonni darro dheeraad ah. Waana mid aannu ka welwel-sannahey.
War-bixinta la xiriirta in la ictiraafo maqaamka magaalada Jerusalaan (Qudus) iyo in safaaradda dalka Mareeykanka loo raro carrigaa ayuu Madax-wayne Trump ku soo qaadan doonaa khudbaddiisa caawa, sida qorshuhu yahay.
Carriga Bariga Dhexe ayaa dhaleecooyin ballaaran looga soo gudbiyay Trump, iyada oo Margot Wallström, wasiirka arrimmaha dibadda Sweden ku tilmaantay tallaabadaa la filayo mid halis ah.
Halka uu Henrik Carlborg rajeeynayo in dalka Sweden halkiisa uu ka sii wadi doono culeeyska su’aashaa:
-Midda ugu wanaag-san waxay tahay in Sweden gacan ka geeysato in laga baaqsado tallaabadaa, sida ay wasiirraduba u dhaleeceeysay. Waxaan rajeeynayaa in aan go’aankaa la gaarin. Haddii la gaarana aan halkeeda ka sii wadno dhaleeceeynta.